Warshadaha Soo Saarka | Soosaarayaasha Wax Soosaarka Shiinaha, Shirkadaha
Baaxadda Codsigan: Alaabtani waxay ku habboon tahay ururinta, qaadidda iyo kaydinta qayb ururinta fayriska. Tilmaamaha loo isticmaalo 2. Adeegso muraayad shaybaadh ah oo laga soo qaadanayo nasopharynx illaa shuruudaha sambal kala duwan. 3. Qaababka sanbal qaadistu waa kuwan hoosta: a. Sanka sanka: Si tartiib ah u geli madaxa masiixa marinka sanka ee marinka sanka, in muddo ah ka dibna si tartiib ah u wareeji, ...
Labalaab Halbeega Ururinta Dhiiga
Iyada oo loo eegayo nooca isku xidhka, Cirbadaha dhiigga ee la tuuri karo ayaa lagu kala saari karaa nooca-irbadaha iyo irbadaha-jilicsan ee dhiigga. Cirbadaha laba-jibbaaradu waa irbado dhiig oo jilicsan oo King ah. Cirbad uruurin dhiig oo loo adeegsaday aruurinta saamballada dhiiga inta lagu gudajiray baaritaanka caafimaadka ayaa ka kooban irbad iyo irbad.